Soo dejisan MyDefrag 4.3.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: MyDefrag
MyDefrag – software ah in defrag drives adag oo ay tayadoodii nidaamka. Software wuxuu kuu ogol yahay in la kaararka xusuusta, drives kumbiyuutarka iyo aaladaha kaydinta kala duwan u shaqeeyaan. MyDefrag go’aansan files by jiidaha kala duwan iyo meelaha files in si joogto ah loo adeegsaday bilowga ah drive ka adag oo keena in xawaaraha ee habka shaqada. Software ayaa ku siinayaan shaqada la-qoraal oo ogolaanaysa in aad ku reserved aagga si ay meel u faylasha. MyDefrag ka mid ah hab gaar ah oo awood si ay u qabtaan defragmentation inta lagu jiro Xamuulka ugu yar ee nidaamka oo si weyn u yaraynaysaa nidaamka shaqada.
Support of sidayaal xogta kala duwan
Work la qoraallada
Waxaa la dhisay-in jadwaliye
Soo dejisan MyDefrag
Faallo ku saabsan MyDefrag
MyDefrag Xirfadaha la xiriira